अनुशासनको डण्डा शेरबहादुरले कि शेरबहादुरलाई ? « Janata Samachar
अनुशासनको डण्डा शेरबहादुरले कि शेरबहादुरलाई ?
प्रकाशित मिति :6December, 2018 2:28 pm
चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डे, बद्री पाण्डे, गुरुराज घिमिरे, विश्वप्रकाश शर्मा (हाल जागिरे), गगन थापा, प्रदीप पौडेल आदिइत्यादी कांग्रेसभित्रको एउटा जमात कांग्रेस सुर्धाछौँ भन्दै टिभीका पर्दामा ‘टाइसुट, कालो चस्मा, फुर्तिफार्ति हाउभाउ’ प्रदर्शन गरिरहेका भेटिने गरेका थिए । के यो जमातले प्रस्तावित महासमिति बैठकमा ‘अनुशासनको डण्डा शेरबहादुरले कि शेरबहादुरलाई’ भन्ने प्रश्नमा भोटिङ गराउन सक्छ ? भोटिङ गराउन पाउनु त स्वतन्त्रताको प्रजातन्त्रको प्रथम प्राणतत्व हो । प्राणीजगतको सास भएजस्तै । यदि यो जमातले यही एउटा प्रश्नमा मतदान गराएर अल्पमतको नै सही, कांग्रेसलाई सुधार्ने कित्ता प्रस्ट पार्न सकेनन् भने, यिनीहरुको टिभीका पर्दाका फुर्तिफार्ति दावा पनि चोक्टा खान दौडँदा हाफेको ¥याल चुहाई मात्र हो ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी चिनारीका विषयमा यतातिरका दिनमा खासै मान्नुपर्ने नयाँ केही छैन । ‘पुरानो पार्टी हो’ र ‘एकमात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी’ भन्ने २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन उतासम्म एउटा छवि थियो । एमाले, माओवादी जस्ता पार्टीहरुलाई पनि कांग्रेसले आफूलाई मात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी नठानोस् भन्ने लाग्दथ्यो । ‘हामीलाई प्रजातान्त्रिक हुन कांग्रेसको सर्टिफिकेट चाँहिँदैन ।’ भेट्रान भेट्रान कम्युनिष्ट शीर्षनेताहरु भाषण गरिरहेका भेटिन्थे । यस्तो छवि कांग्रेसलाई इतिहासबाट उपलब्ध उपहार जनाधार थियो ।
यतिखेर कांग्रेससँग ‘एकमात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी’ भन्ने त्यो छवि बचेको छैन । जुन क्षण पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवन भरतपुरको चुनावी सभामा उभिएर ‘रुख’ चिन्हमा भोट माग्नुको साटो कम्युनिष्ट चुनाव चिन्ह ‘हँसिया हथौडा’मा भोट मागे । त्यस क्षणबाट इतिहास उपहार त्यो छवि छुमन्तर भएजस्तै गरी अलप भएको छ । कांग्रेस सभापतिले नै ‘हँसिया हथौडा’मा हात मागेपछि रुखमात्रै प्रजातान्त्रिकको चुनाव चिन्ह होइन रहेछ भन्ने आमजनभावना स्थापित भएको छ । संस्थागत हुने क्रममा छ । कांग्रेसको जनाधारमा यसरी एउटा ठूलो पहिरो गएको छ । यसको एउटा फरक के हुन्छ भने हिजो जनताले कांग्रेसलाई रोजेर भोट दिन्थे भने भोलि भोट दिने ठाउँ अर्को नभेटेर ‘कर’ले देलान् । यो अर्को कुरा हो, भोलिको कुरा भोलि नै गरौँला ।
कांग्रेसले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्युनिष्ट (माओवादी)को चुनाव चिन्ह ‘हँसिया हथौडा’मा भोट माग्यो भने प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा कम्युनिष्ट एकतालाई भोट दिनु अधिनायकवाद निम्त्याउनु हो’ भन्यो । कांग्रेसले भन्न खोजेको अधिनायकवाद ‘स्टालिन’ र ‘माओत्सेतुङ’को जस्तो थियो । तर यस्तो अधिनायकवाद नेपाली जनताले जानेका वा भनौँ भोगेका थिएनन् । नेपाली जनताले जानेको भोगेको अधिनायकवाद भनेको इतिहासमा जंगबहादुरको र २००७ साल यताको निर्दलको ३० वर्ष महेन्द्रको र २०४७ को संविधान लागु भएर त्यसको अन्येष्टीसम्म बहुदलको १७ वर्ष गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मात्रै थियो । एकपटक कम्युनिष्टहरुले ल्याउने भनिएको स्टालिन र माओत्सेतुङको जस्तो अधिनायकवाद पनि जानी हालौँ न, भोगी हालौँ न भन्ने भावना आम जनमानसमा पलायो । परिणाम कांग्रेसको कम्युनिष्टप्रतिको नारा, अधिनायकवाद उसैका लागि बुम¥याङ भयो । भारतमा सोनिया गान्धीलाई जस्तै प्रत्यक्षतर्फ टाउको गिन्तीको संख्यामा ‘प्रमुख प्रतिपक्षी’को हैसियत पनि पुगेन । इतिहासले मात्र प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता पाएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवन भरतपुरको चुनावी सभामा उभिएर ‘रुख’ चिन्हमा भोट माग्नुको साटो कम्युनिष्ट चुनाव चिन्ह ‘हँसिया हथौडा’मा भोट मागे । त्यस क्षणबाट इतिहास उपहार त्यो छवि छुमन्तर भएजस्तै गरी अलप भएको छ । कांग्रेस सभापतिले नै ‘हँसिया हथौडा’मा हात मागेपछि रुखमात्रै प्रजातान्त्रिकको चुनाव चिन्ह होइन रहेछ भन्ने आमजनभावना स्थापित भएको छ । संस्थागत हुने क्रममा छ । कांग्रेसको जनाधारमा यसरी एउटा ठूलो पहिरो गएको छ । यसको एउटा फरक के हुन्छ भने हिजो जनताले कांग्रेसलाई रोजेर भोट दिन्थे भने भोलि भोट दिने ठाउँ अर्को नभेटेर ‘कर’ले देलान् ।
अहिलेको कांग्रेसको छवि भने पनि शक्ति भने पनि यही नै हो । त्यही कांग्रेसले मंसिरको २८ गतेदेखि पुस २ गतेसम्म महासमिति बैठक डाकेको छ । ‘विधान संशोधन’लाई महासमितिको प्रमुख एजेण्डा बनाएबाट नै २०–३० करोड खर्च भएर एउटा ‘कर्मकाण्ड’ परम्परागत झाराटराई बाहेक यो महासमितिले कांग्रेसको वर्तमान खतम हालतमा सुधार ल्याउन एउटा सिन्को पनि नभाँच्ने निश्चित छ । किनभने कांगेसको वर्तमान समस्या विधान संशोधन वा नयाँ विधान हुँदै होइन ।
कांग्रेसले आजसम्म जारी विधानलाई मात्र पालना गरिदिएको भए अहिलेको जस्तो ‘शेरेले सिध्यायो’ भन्दै टाउकोमा हात राखेर अलापविलाप गरिरहनु परेको अवस्था आउने नै थिएन । त्यसो हुँदा प्रस्तावित महासमितिको तथाकथित विधान संशोधन एजेण्डा अशली समस्याबाट सुतूरमुर्गले जस्तै टाउको लुकाउने हर्कत मात्र हो । ल साँच्चै कांग्रेसले भएको विधानलाई मात्र अक्षरशः पालना गरेर हिँड्न थालोस् त, पार्टीको आधा समस्या यसै समाधान हुन्छ । पालना नहुने विधान संशोधनको बखेडामा कार्यकर्तालाई बर्गलाउनु भनेको कांग्रेसलाई सखाप तुल्याएर त्यसमा बलिया भएका मुठ्ठीभर प्राधिकार ठालु नेताहरुको जालसाजी चालबाजी मात्रै हो । प्रस्तावित महासमिति बैठक जुन बैठकले भएका विवाद सुल्झाउने त कल्पनै नगरौँ । हेर्दै गर्नुहोला, प्रस्तावित महासमितिपछि पार्टीभित्र थप यदुवंशी विनासको नयाँ क्यान्सर देखा पर्ने निश्चित छ ।
कांग्रेसको अहिलेको मूल समस्या विधान संशोधन नभएर अर्कै छ । मुख्य कुरो कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले अहिलेसम्म चुनाव हार्नुको कारणबारे तथ्य विश्लेषण गरेकै हैन । एउटा सानो उदाहरणबाट कुरा शुरु गरौँ । कांग्रेसमा आधा शताब्दीभन्दा बढी समर्पित भएर निष्ठा र इमानदारीपूर्वक काम गर्नु भएका नेताका ‘आत्मवृत्तान्त’हरुमा पनि आइसकेको कुरो हो । कुरा संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको पहिलो तीन चरण निर्वाचनका समय टिकट बाँड्दाको हो । कांग्रेसका नाम नलिउँ (अदालतमा उभिएर बयान दिनुप¥यो भने नाम पनि लिउँला) एकजना तस्कर माफियाका ठूला भरिया भनेर आमजनतामानसमा देशज्याव्यापी चिनारी बनाएका चुनाव हार्ने निश्चित भएका सभासदले टिकट पाउन श्रीमती आरजु देउवालाई ‘महारानी’ सम्बोधन गर्न थालेछन् । श्रीमती ‘महारानी’ भएपछि आफू फोकटमा ‘राजा’ हुन पाउने भएपछि पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि ती ‘महारानी’ सम्बोधनकर्तालाई टिकट दिने कुरो त छदैँ थियो, मन्त्री नै बनाइदिएछन् । त्यसपछि त देउवा निवास बालुवाटार र बुढानिलकण्ठमा ‘महारानी’ सम्बोधन गर्ने सभासदहरुको लर्को नै लागेछ । त्यही कारण देउवाको पछिल्लो मन्त्रीमण्डल ६५ सदस्यीय ‘रेकर्डतोड’ बनेको त्यतिखेर मिडियामा टिप्पणी पनि आएको थियो । त्यसपछि ‘महरानी’ सम्बोधनकर्ता प्राधिकारीहरुले के ‘रणनीति’ बनाएछन् भने, ‘प्रथम महिला प्रधानमन्त्री’को इतिहास बनाउने ! त्यही ढङ्गले टिकट बाँडेर चुनाव हारेका जिल्ला सभापतिहरु र कोषाध्यक्षहरुको बैठकमा पनि चर्को रुपमा कुरो उठेको सारा मिडियामा ‘ब्रेकिङ हाइलाइट्स समाचार’ बनेकै हो ।
साँचोमा कांग्रेस महासमितिको मुख्य एजेण्डा यहीँनेर छ । विधान संशोधनको पछिल्लो झमेला आउनुअघि त चुनावमा अन्तर्घात गर्ने माथि कारबाही चलाइने सभापति देउवाले उचालेको अनुशासनको डण्डाको पनि मिडियामा खुब ‘ब्रेकिङ न्यूज’ बनेको थियो । त्यसमा कांग्रेसभित्रकै ठूला घरानियाँ बौद्धिक समाजवादी नेतृत्व कहलिएका कलमबाजहरुका ठूला घरानियाँ मिडियाहरुमा टिप्पणी पनि आएको थियो, ‘अनुशासनको डण्डा शेरबहादुर देउवाले कि शेरबहादुर देउवालाई ?’ ती टिप्पणीमा प्रश्न पनि उठाइएको थियो ।
चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डे, बद्री पाण्डे, गुरुराज घिमिरे, विश्वप्रकाश शर्मा (हाल जागिरे), गगन थापा, प्रदीप पौडेल आदिइत्यादी कांग्रेसभित्रको एउटा जमात कांग्रेस सुर्धाछौँ भन्दै टिभीका पर्दामा ‘टाइसुट, कालो चस्मा, फुर्तिफार्ति हाउभाउ’ प्रदर्शन गरिरहेका भेटिने गरेका थिए । के यो जमातले प्रस्तावित महासमिति बैठकमा ‘अनुशासनको डण्डा शेरबहादुरले कि शेरबहादुरलाई’ भन्ने प्रश्नमा भोटिङ गराउन सक्छ ? भोटिङ गराउन पाउनु त स्वतन्त्रताको प्रजातन्त्रको प्रथम प्राणतत्व हो । प्राणीजगतको सास भएजस्तै । यदि यो जमातले यही एउटा प्रश्नमा मतदान गराएर अल्पमतको नै सही, कांग्रेसलाई सुधार्ने कित्ता प्रस्ट पार्न सकेनन् भने, यिनीहरुको टिभीका पर्दाका फुर्तिफार्ति दावा पनि चोक्टा खान दौडँदा हाफेको ¥याल चुहाई मात्र हो । चेतना भया । अस्तु ।
(वरिष्ठ पत्रकार, लेखक तथा अथक राजनीतिक योद्धा सुवेदीको लेख हरेक महिना २० गते र ५ गते जनतासमाचार डटकममा पढ्न पाउनु हुनेछ )